Batisa - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > batisa
Ny batisa amin’ny rano dia mariky ny fibebahan’ny mpino, famantarana fa manaiky an’i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy izy, dia ny fandraisana anjara amin’ny fahafatesan’i Jesosy Kristy sy ny nitsanganany tamin’ny maty. Ny atao batisa “amin’ny Fanahy Masina sy ny afo” dia manondro ny asa fanavaozana sy fanadiovana ataon’ny Fanahy Masina. Ny Fiangonan’Andriamanitra Maneran-tany dia manao batisa asitrika. (Matio 28,19; Asan'ny Apostoly 2,38; Romana 6,4-5; Lioka 3,16; 1. Korintiana 12,13; 1. Petrus 1,3-9; Matthew 3,16)
Batemy - mariky ny filazantsara
Ny ritual dia ampahany miavaka amin'ny fanompoana ao amin'ny Testamenta Taloha. Nisy ny fombafomba isan-taona, isam-bolana ary isan'andro. Nisy ny fombafomba tamin'ny fahaterahana sy ny fombafomba tamin'ny fahafatesana, misy ny fombafomba amin'ny sorona, ny fanadiovana ary ny fidirana. Voaresaka ny finoana nefa tsy malaza.
Mifanohitra amin'izany, ny Testamenta Vaovao dia manana fombafomba roa fotsiny: ny batisa sy ny fanasan'ny Tompo - ary samy tsy misy torolàlana momba ny fomba hanatanterahana izany.
Nahoana ireo roa ireo? Maninona ianao no manana fombafomba rehetra amin'ny fivavahana izay misy finoana lehibe indrindra?
Heveriko fa ny antony lehibe indrindra dia ny fanasan'ny Fanasan'ny Tompo sy ny batisa dia maneho ny filazantsaran'i Jesoa. Mamerina ireo singa fototry ny finoanay izy ireo. Andao hojerentsika ny fomba ifandraisan'izany amin'ny batisa.
Ahoana no fomba hanehoan’ny batisa ireo fahamarinana ivon’ny filazantsara? Nanoratra toy izao ny apostoly Paoly: “Sa tsy fantatrareo fa izay rehetra atao batisa ho amin’i Kristy Jesosy dia atao batisa ho amin’ny fahafatesany? Koa niara-nalevina taminy tamin’ny batisa ho amin’ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an’i Kristy tamin’ny maty tamin’ny voninahitry ny Ray no handehanantsika amin’ny fiainam-baovao koa. Fa raha miray aminy isika ka tonga tahaka Azy amin’ny fahafatesany, dia ho tahaka Azy koa amin’ny fitsanganana amin’ny maty” (Romana 6,3- iray).
Nilaza i Paoly fa ny batisa dia maneho ny firaisantsika amin’i Kristy amin’ny fahafatesany sy ny fandevenana azy ary ny fitsanganany tamin’ny maty. Ireo no hevi-dehibe ao amin’ny filazantsara (1. Korintiana 15,3-4). Miankina amin’ny fahafatesany sy ny fitsanganany amin’ny maty ny famonjena antsika. Miankina amin’ny fahafatesany ny famelan-keloka - ny fanadiovana ny fahotantsika; Miankina amin’ny fitsanganany amin’ny maty ny fiainantsika kristianina sy ny hoavintsika.
Ny batisa dia maneho ny fahafatesan'ny tenantsika taloha - ny olona taloha nohomboana tamin'i Kristy - niara-nalevina tamin'i Kristy tamin'ny batisa izy (Romana 6,8; Galatianina 2,20; 6,14; Kolosiana 2,12.20). Izy io dia maneho ny maha-izy antsika an'i Jesoa Kristy - mamorona fiarahamonin'ny anjara miaraka aminy isika. Ekentsika fa ny fahafatesany dia nitranga “ho antsika”, “noho ny fahotantsika”. Miaiky isika fa nanota, manana fironana hanota, fa mpanota mila Mpamonjy. Fantatsika fa mila fanadiovana isika ary izany fanadiovana izany dia mitranga amin’ny alalan’ny fahafatesan’i Jesosy Kristy. Ny batisa dia fomba iray anehoantsika an’i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy.
Miaraha amin'i Kristy
Ny batisa dia maneho vaovao tsara kokoa aza - amin'ny batisa dia natsangana miaraka amin'i Kristy isika mba hiara-miaina aminy (Efesiana). 2,5-6; Kolosiana 2,12-13.31). Ao Aminy no ananantsika fiainam-baovao ary niantsoana antsika hiaina araka ny fomba fiaina vaovao, miaraka Aminy ho Tompo izay mitarika antsika sy mitondra antsika hiala amin’ny lalan-dratsintsika ka ho amin’ny lalana marina sy feno fitiavana. Amin’izany fomba izany no anehoantsika ny fibebahana, ny fiovan’ny fomba fiainantsika, ary koa ny tsy ahafahantsika manao izany fiovana izany amin’ny tenantsika - izany dia mitranga amin’ny alalan’ny herin’i Kristy nitsangana tamin’ny maty izay mitoetra ao anatintsika. Mitovy amin’i Kristy isika amin’ny fitsanganany amin’ny maty, tsy ho an’ny ho avy ihany, fa ho an’ny fiainana eto sy ankehitriny koa. Anisan'ny tandindona izany.
Tsy mpamorona ny batisan'ny batisa i Jesosy. Nivoatra tao amin'ny Jodaisma ary nampiasain'i Jaona Mpanao Batisa ho fombafomba entina maneho ny fibebahana, miaraka amin'ny rano maneho ny fanadiovana. Nanohy an'io fanao io i Jesosy ary taorian'ny nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty dia nanohy ny fampiasana azy ireo ny mpianatra. Maneho amin'ny fomba lehibe izany fa manana fototra vaovao ho an'ny fiainantsika isika ary fototra vaovao ho an'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra.
Satria nahazo famelan-keloka isika ary nodiovina tamin'ny fahafatesan'i Kristy, dia nahatsapa i Paoly fa ny batisa dia midika fa ny fahafatesany ary ny fandraisantsika anjara amin'ny fahafatesany. Nomena aingam-panahy koa i Paoly hanampiana ny fifandraisana amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty Rehefa miakatra avy amin'ny endri-batom-batana isika dia maneho ny fitsanganana amin'ny fiainam-baovao - fiainana ao amin'i Kristy, mitoetra ao amintsika.
Nanoratra koa i Petera fa ny batisa dia mamonjy antsika “tamin’ny nitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty” (1. Petrus 3,21). Tsy mahavonjy antsika ny batisa. Ny fahasoavan’Andriamanitra no namonjena antsika amin’ny alalan’ny finoana an’i Jesosy Kristy. Tsy mahavonjy antsika ny rano. Mamonjy antsika fotsiny ny batisa amin’ny heviny hoe “mangataka feon’ny fieritreretana madio” isika. Izany dia fanehoana hita maso ny fanoloran-tenantsika ho an’Andriamanitra, ny finoantsika an’i Kristy, ny famelan-keloka ary ny fiainam-baovao.
Atao anaty vatana iray
Tsy natao batisa ao amin’i Jesoa Kristy ihany isika, fa ao amin’ny vatany koa, dia ny fiangonana. "Fa Fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho tena iray..." (1. Korintiana 12,13). Midika izany fa tsy afaka manao batisa ny tenany ny olona iray - tsy maintsy atao ao anatin'ny rafitry ny fiarahamonina kristiana izany. Tsy misy kristiana miafina, olona mino an’i Kristy, nefa tsy misy mahalala izany. Ny lamina ara-baiboly dia ny fanekena an’i Kristy eo anatrehan’ny hafa, ny fanekena ampahibemaso an’i Jesosy ho Tompo.
Ny Batemy dia iray amin'ireo fomba ahafantarana an'i Kristy, amin'ny alalàn'ny namana rehetra amin'ilay olona atao batemy dia afaka miaina ny fanoloran-tena natao. Ity dia mety ho fotoana mahafaly amin'ny fihiran'ny fiangonana ireo hira sy fitsenana ilay olona any am-piangonana. Na mety ho fombafomba kely kokoa izay anaovan'ny loholona iray (na solontena iray an'ny fiangonana manana fahefana) ny mpino vaovao, mamerina ny dikan'ilay fihetsika ary mamporisika ilay olona hatao batemy amin'ny fiainany vaovao ao amin'i Kristy.
Ny batemy dia fombafomba iray izay mampiseho fa efa nibebaka tamin'ny fahotany ny olona, ​​efa nanaiky an'i Kristy ho Mpamonjy, ary nanomboka nitombo ara-panahy - tena efa Kristiana tokoa izy. Ny batisa dia mazàna rehefa vita ny fanoloran-tena nataon'ny olona, ​​saingy mety atao ihany izy indraindray.
Tanora sy ankizy
Rehefa avy mino an'i Kristy ny olona iray, dia manontany ny hatao batisa izy. Mety ho tanteraka izany raha tsy antitra na somary tanora ilay olona. Ny tanora iray dia mety haneho ny zavatra inoany amin'ny olon-dehibe, fa mbola afaka manana finoana.
Mety hanova ny sainy ve ny sasany amin'izy ireo ary hiala amin'ny finoana indray? Angamba, saingy mety hitranga amin'ny mpino olon-dehibe ihany koa izany. Hitranga ve fa ny sasany amin'ireo fiovam-po tamin'ny ankizy ireo dia tsy tena nisy? Angamba, fa mitranga ihany koa amin'ny olon-dehibe. Raha misy olona manenina ary mino an'i Kristy, ka afaka mitsara ny pasitera, dia azo atao batisa izany olona izany. Na izany aza tsy fanao ny manao batisa ny zaza tsy ampy taona raha tsy eken'ny ray aman-dreniny na mpiambina ara-dalàna. Raha toa ka manohitra ny batisa ny ray aman-drenin'ireo zaza tsy ampy taona dia tsy kristiana ilay zaza izay mino an'i Jesosy satria tsy maintsy miandry izy mandra-pivoany hatao batisa.
Fomba ataontsika ny manao batemy amin'ny alàlan'ny fandrobohana ao amin'ny Fiangonan'Andriamanitra. Mino izahay fa io no fomba fanao indrindra tamin'ny taonjato voalohany Judaisme sy tany amin'ny fiangonana voalohany. Mino izahay fa ny fandatsahana tanteraka dia maneho ny fahafatesana sy ny fandevenana tsara kokoa noho ny famafazana. Na izany aza, tsy ataontsika fomba fiadian-kevitra mampiady ny Kristiana ny fomba fanaovana batisa.
Ny zava-dehibe indrindra dia ny nandao ny fiainam-pahotana taloha taloha ary mino an'i Kristy ho Tompony sy Mpamonjy azy. Mba hanohizana ny fitantarany ny fahafatesana dia afaka milaza isika fa maty niaraka tamin'i Kristy ilay olona taloha, na nalevina tsara ny faty na tsia. Nambaraina ilay fanadiovana, na dia tsy naseho ny fandevenana aza. Maty ny fiainana taloha ary misy ny fiainana vaovao.
Ny famonjena dia tsy miankina amin'ny fomba marina fanaovana batemy (tsy manome antsipiriany betsaka momba ny fomba fanaovana azy ny Baiboly), na amin'ny teny tena izy, toy ny hoe nisy vokany tamin'ny majika ireo teny ireo. Miankina amin'i Kristy ny famonjena fa tsy amin'ny halalin'ny ranon'ny batisa. Ny kristiana vita batemy amin'ny famafazana na fandrarahana azy dia mbola kristiana. Tsy mitaky fanaovana Batemy indray isika raha tsy misy olona mihevitra fa mety izany. Raha efa 20 taona no nisy ny vokatry ny fiainana kristiana iray, raha naka ohatra iray monja dia tsy ilaina ny miady hevitra momba ny maha-marina ny lanonana iray natao 20 taona lasa izay. Ny Kristianisma dia miorina amin'ny finoana fa tsy amin'ny fanaovana fombafomba.
Tsy fanao ny manao batemy ny zaza na ny zaza izay mbola kely loatra ka maneho ny finoany, satria mahita ny batisa ho fanehoana finoana, ary tsy misy voavonjy amin'ny finoan'ny ray aman-dreny. Na izany aza, tsy manameloka antsika ho tsy Kristiana isika izay manao batemy zazakely. Mamelà ahy hamaly vetivety ireo tohan-kevitra roa iraisana indrindra ho fankasitrahana ny batisan'ny zaza.
Voalohany, lazain’ny andinin-teny toy ny Asan’ny Apostoly amintsika 10,44; 11,44 sy 16,15 Natao batisa avokoa ny trano [fianakaviana] manontolo, ary ny ankohonana mazàna no nisy zazakely tamin’ny taonjato voalohany. Azo inoana fa tsy nanan-janaka ireo tokantrano manokana ireo, saingy mino aho fa ny fanazavana tsara kokoa dia ny mamaky ny Asan'ny Apostoly 16,34 sy 18,8 Mariho fa toa lasa nino an’i Kristy ny ankohonana rehetra. Tsy mino aho hoe nanana finoana marina ny zazakely, na niteny tamin’ny fiteny tsy fantatra ny zazakely (and. 44-46). Angamba ny trano manontolo dia natao batisa tahaka ny ninoan’ny mpianakavy an’i Kristy. Midika izany fa hatao batisa koa izay rehetra ampy taona hinoana.
Ny tohan-kevitra faharoa izay ampiasaina indraindray hanohanana ny batisan'ny zaza dia ny foto-kevitry ny fret. Ao amin'ny Testamenta Taloha, ny ankizy dia tafiditra tao anatin'ny fanekena ary ny fombafomba amin'ny fanekena ny fanekena dia ny famorana izay natao tamin'ny zazakely. Ny fanekena vaovao dia fanekena tsara kokoa miaraka amin'ny fampanantenana tsaratsara kokoa, noho izany dia tokony hampidirina sy hampidirina ho azy avy hatrany ny zaza ary asiana marika amin'ny fampidirana ny fanekena vaovao, ny batisa, efa tamin'ny fahazazany. Na izany aza, tsy mifankahazo ny tsy fitovian'ny taloha sy ny fanekena vaovao. Nisy olona niditra tamin'ny fanekena taloha tamin'ny alalàn'ny ray aman-dreny, saingy amin'ny fibebahana sy ny finoana ihany no ahafahan'ny olona miditra ao amin'ny fanekena vaovao. Tsy mino izahay fa ny taranaky ny kristiana rehetra, hatramin'ny taona fahatelo sy fahefatra kosa, dia hino an'i Kristy ho azy ho azy ireo! Tsy maintsy mino ny tenany ny tsirairay.
Mitohy mandritra ny taonjato maro ny ady hevitra momba ny fomba fanaovana batisa sy ny vanim-potoanan'ny batemy, ary mety ho sarotra kokoa ny adihevitra noho ny voasoratro tao amin'ireo paragrafy vitsivitsy teo aloha. Betsaka no azo lazaina momba izany, saingy tsy ilaina amin'izao fotoana izao.
Indraindray, olona izay natao batisa ho zazakely dia te ho lasa mpikamban'ny Fiangonan'Andriamanitra Momba An'izao tontolo izao. Mihevitra ve isika fa ilaina ny manao batisa ity olona ity? Mihevitra aho fa tsy maintsy ho raisina amina raharaha tsirairay izany, miorina amin'ny firotsahan'ny olona sy ny fahatakarana ny batisa. Raha vao tsy nanam-pinoana sy nanam-pitiavana ilay olona dia azo ekena tsara ny fanaovana batisa ilay olona. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny batisa dia hanazava mazava amin'ilay olona hoe inona no fepetra lehibe noraisin'ny finoana.
Raha vita batemy ilay olona ary efa nandritra ny taona maro naha-Kristiana olon-dehibe azy, dia tsy mila manery azy hanao batisa azy isika. Raha mangataka an'izany ry zareo, dia azo antoka fa te hanao izany, saingy tsy mila miady hevitra momba ny fombafomba izay natao am-polony taona maro lasa izay isika rehefa hita ny voankazo kristiana. Afaka midera ny fahasoavan'Andriamanitra fotsiny isika. Kristiana ilay olona, ​​na inona na inona navoaka tanteraka ilay lanonana.
Manatrika ny Sakafon'ny Tompo
Noho ny antony mitovy amin'izany dia avela isika hankalaza ny Fanasan'ny Tompo miaraka amin'ireo olona izay tsy vita batemy amin'ny fomba fanaontsika taloha. Ny masonkarena dia ny finoana. Raha samy mino an'i Jesosy Kristy isika, dia samy tafakambana aminy, samy natao Batemy ho amin'ny vatany tamin'ny fomba iray na tamin'ny fomba hafa, ary afaka mihinana amin'ny mofo sy divay. Azontsika atao koa ny mandray sakramenta miaraka amin'izy ireo raha manana fiheveran-diso momba ny zavatra hitranga amin'ny mofo sy divay izy ireo. (Moa ve isika rehetra tsy manana fiheverana diso momba ny zavatra sasany?)
Tsy tokony ho variana amin'ny adihevitra momba ny antsipirihany isika. Ny finoantsika sy ny fanaovantsika manao batisa ireo izay antitra dia mino an'i Kristy amin'ny alàlan'ny fandrobohana. Te hampiseho hatsaram-po amin'ireo olona manana finoana hafa koa izahay. Manantena aho fa ampy ireo fanambarana ireo mba hanazavana ny fomba fijerintsika amin'ny lafiny sasany.
Andeha isika hifantoka amin'ny sary lehibe kokoa izay omen'ny apostoly Paoly: ny batisa dia maneho ny toetrantsika taloha izay maty miaraka amin'i Kristy; Esorina ny fahotantsika ary miaina ao amin'i Kristy sy ao amin'ny Fiangonantsika ny fiainantsika vaovao. Ny batisa dia fanehoana fibebahana sy finoana - fampahatsiahivana fa voavonjy amin'ny alàlan'ny fahafatesana sy ny fiainan'i Jesoa Kristy isika. Ny Batisa dia maneho ny filazantsara amin'ny vanimpotoana kely - ny fahamarinana lehibe indrindra amin'ny finoana izay aseho indray rehefa mandeha ny fiainana kristianina.